Wana Unyanzvi hweVashandi neHodges Direct, Chikamu cheHodges University
Kugamuchirwa kuHU Direct, An Express Chikamu cheHodges University
Hodges University inopa vashandi-zvinotungamirwa zvitifiketi uye madhigirii ari kudiwa mudunhu nekupfuura Nzvimbo dzinosanganisira hutano, tekinoroji, bhizinesi, manejimendi, uye mari. Vadzidzi vanogona kutora makirasi pamusasa, online, uye kuburikidza neTechnology Enhanced Classrooms (TEC), iyo inovabvumidza kuenda kukirasi kubva chero kupi, kugara online. Hodges University inopawo yakatanhamara Chirungu seChipiri Mutauro (ESL) chitupa chirongwa.
Kutanga neLehigh Acres Nzvimbo yekufarira, HU Direct ichave nekwaniso yekuwana nzvimbo yekirasi uye hofisi yemudzidzisi, imo muLehigh Acres, muKunakira CRC. Makirasi uye mashopu anokwanisa kuitirwa munharaunda yeLehigh Acres pamazuva nenguva dzinokodzera zvakanyanya vagari vemunharaunda. Hodges Yunivhesiti inozivikanwa nekugona mune vakuru vadzidzi, ndosaka mapurogiramu mazhinji achiitirwa manheru uye pakupera kwevhiki kukambasi, kana online.
Mubatanidzwa Usinga fungidzike - Hodges University uye Maindasitiri eGoodwill
Pakutanga kuona, zvingaratidzika sekuti Hodges University uye Maindasitiri eGoodwill eSouthwest Florida haizove nezvakawanda zvakafanana. Nekudaro, nemasangano ese ari maviri ari kushanda pamwe chete, tinogona kugadzirisa zvirinani zvinodiwa nevashandi munzvimbo medu.
Ose maGoodwill neHodges University anoshanda nesimba kuti asvike, asi pane imwe nzira yekutora izvo kuenda padanho rinotevera. Kufarira kunopa kutanga kwakasimba kune avo vari kutsvaga kutanga kana kushandura basa nekuda kwekukanganiswa kunokonzerwa neCOVID-19. Hodges University yakatanga chirongwa chitsva chinonzi HU Direct, An Express Chikamu cheHodges University.
Mubatanidzwa uyu unounza mikana yakawanda yekudzidzisa uye yevashandi yekudzidzira kune vagari, munharaunda yavo chaimo.
Taura nesu nhasi kuti uwane rumwe ruzivo!
HU Yakanangana Newe Here?
Kana iwe uchifarira kuwedzera hunyanzvi hwako hwekubasa, saka HU Direct ndeyako!
Ndeapi Makosi Anowanikwa neHodges Direct?
Makirasi anowanikwa husiku uye kupera kwevhiki kuGoodwill Maindasitiri Lehigh Acres Nharaunda Resource Nzvimbo (CRC) Nzvimbo. Makosi anosanganisira:
Chirungu Grammar Pamhepo
Chekutanga Line Supervisor
Unyanzvi munzvimbo yebasa
Nzira yekuenda Kumba Imba
Dhairekita Kutsigira Nyanzvi
Mubairo wedu mukurusa kuona iko kutaridzika kwetariro uye kuvimba kutsva vadzidzi pavanowana zivo nyowani uye hunyanzvi zvinozovabatsira kuona zviroto zvavo. Iyo yakanaka mhedzisiro inozoenderera kumberi kwezvizvarwa.